Yaitorwa Cup tsono Roller Kupa - China Viproce Industrial
Introduction: Yaitorwa mukombe tsono chinotenderera mabheyaringi Structure pamusoro DC tsono chinotenderera kubereka (DC mhando) chakagadzirwa chando anokungurutsirwa simbi ubvise zvakarurama kuumbwa. Maumbirwo DC tsono chinotenderera mabheyaringi ine nzvimbo aponese uye yakakwirira chinzvimbo. Vane akakodzera mafomu dzisina nzvimbo uye pokugara kwete nesimba zvokuva Raceway. No chinodiwa pamusoro axial nzvimbo apo DC tsono chinotenderera zvinobereka rikazvisundira kupinda redzimba. Mafomu dzakawanda mhete yomukati hakuna basa DC tsono chinotenderera ...
Yaitorwa mukombe tsono chinotenderera mabheyaringi
Maumbirwo DC tsono chinotenderera kubereka (DC mhando) chakagadzirwa chando anokungurutsirwa simbi ubvise zvakarurama kuumbwa. Maumbirwo DC tsono chinotenderera mabheyaringi ine nzvimbo aponese uye yakakwirira chinzvimbo. Vane akakodzera mafomu dzisina nzvimbo uye pokugara kwete nesimba zvokuva Raceway. No chinodiwa pamusoro axial nzvimbo apo DC tsono chinotenderera zvinobereka rikazvisundira kupinda redzimba.
Mafomu dzakawanda mhete yomukati hakuna basa DC tsono chinotenderera mabheyaringi kana mugodhi Raceway zvisingaiti, mureza rwomukati zvenzeve DC kuenzanisa Open uye DC tsono chinotenderera mabheyaringi, Close mugumo DC tsono chinotenderera mabheyaringi zvakanaka nokuda Simbiso panopera mugumo inobereka . Uchishandisa tembiricha chikuva mabheyaringi girisi lubricated vari -20 ℃ kuti + 120 ℃.
Zvivako siyana munhevedzano wakavhomorwa mukombe tsono rollers:
Arşive dzinoti: HK BK HKS F FH Fy MF MFH MFY
Padiki dzakatevedzana: SCE BCE Sch bch SN CSN B Mwari bh M MH
Next: Tsono Roller Kupa
Hwaswedera Cup tsono mabheyaringi
Full mukwanisi Cylindrical Roller mabheyaringi
tsono Roller And Yaiba Assembly
tsono Roller Yaiba mabheyaringi
rakanamatidzwa Hwaswedera Cup tsono Muchibereka
Single Row tsono Roller Kupa
SKF tsono Roller Kupa
Thrust Cylindrical Roller mabheyaringi
Thrust tsono Roller Kupa
Thrust Roller Kupa
Thrust Roller Kupa Catalog
Thrust Roller Kubereka SKF